မြန်မာ့အရေးနှင့် စပ်လျဥ်းပြီး အမေရိကန်သမ္မတ နှင့် အိမ်ဖြူတော်မှ ထုတ်ပြန်ချက်များ – YANGON STYLE
မြန်မာ့အရေးနှင့် စပ်လျဥ်းပြီး အမေရိကန်သမ္မတ နှင့် အိမ်ဖြူတော်မှ ထုတ်ပြန်ချက်များ
မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့ကပင် အိမ်ဖြူတော် ၏ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဂျန်ဆားကီး က ကြေညာချက်ကို အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
“ မြန်မာတပ်မတော်သည် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အခြားသောအရပ်သားတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားဖမ်းဆီးခြင်းအပါအဝင် နိုင်ငံတော်၏ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုကို နှောင့်နှေးစေရန် လုပ်ဆောင်သည့်သတင်းများကြောင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက စိုးရိမ်မိပါသည်။ ဤအခြေအနေကို သမ္မတဘိုင်ဒင်အား အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးဖြစ်သူ ဂျက်ဆူလီဗန်က အသိပေးတင်ပြထားပြီးဖြစ်သည်။ ဒေသတွင်းရှိမိမိတို့၏မိတ်ဖက်နိုင်ငံများနှင့်ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရက်တစ်အင်စတီကျူးရှင်းကို အခိုင်အမာအားပေးထောက်ခံကြောင်း ဆက်လက်၍ ထပ်လောင်းအတည်ပြုပါသည်။ တပ်မတော်နှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးအနေဖြင့် ဒီမိုကရက်တစ်စံနှုန်းများနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို လေးစားလိုက်နာ၍ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသူများကို ယနေ့ ပြန်လွှတ်ပေးရန် တိုက်တွန်းပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပြောင်းလဲရန် သို့မဟုတ် မြန်မာ့ဒီမိုကရက်တစ်အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို ကြန့်ကြာစေရန်အလို့ငှာ မည်သို့သော ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမျိုးကိုမဆို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ပါသည်။ ယင်းသို့ကြိုးပမ်းသည့်လုပ်ရပ်များ နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်ပါက ယင်းအတွက်တာဝန်ရှိသူများကို အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့အနေဖြင့် အခြေအနေကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပြီး ၎င်းတို့၏ဒီမိုကရေစီနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကာလရှည်ကြာကတည်းက များစွာကြိုးပမ်းအားထုတ်လာခဲ့ရပြီးဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့်အတူ ရပ်တည်လျက်ရှိပါသည်။ “
ဖေဖော်ဝါရီလ (၂)ရက်နေ့မှာတေ့ာ မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ အမေရိကန် သမ္မတ ဂျိုးဇက် အာ ဘိုင်ဒင် ဂျူနီယာ မှ ကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
“ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စစ်တပ်၏အာဏာသိမ်းယူမှု၊ အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အရပ်သားတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအား ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုနှင့် နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာမှုတို့သည် နိုင်ငံတော်၏ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးမှုကို တိုက်ရိုက်ကျူးလွန်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်တစ်ရပ်တွင် အင်အားကိုအသုံးပြု၍ နိုင်ငံသားတို့၏ဆန္ဒကိုပယ်ဖျက်ရန် သို့မဟုတ် အများယုံကြည်လက်ခံသောရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ပယ်ဖျက်ရန် မလုပ်ဆောင်သင့်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံသားတို့သည် ရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပနိုင်ရေး၊ အရပ်သားအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာအာဏာလွှဲပြောင်းနိုင်ရေးအတွက် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးအတွင်း တစ်စိုက်မတ်မတ် ကြိုးပမ်းအားထုတ်လာခဲ့ကြပါသည်။ ဤဖြစ်ပေါ်တိုးတက်လာမှုတို့ကို တန်ဖိုးထားလေးစားသင့်ပါသည်။
မြန်မာစစ်တပ်ကသိမ်းယူထားသောအာဏာကိုချက်ချင်းစွန့်လွတ်ရန်၊ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသော တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားလွှတ်ပေးရန်၊ ဆက်သွယ်ရေးကန့်သတ်ချက်အားလုံးကို ရုပ်သိမ်းပေးရန်နှင့် အရပ်သားပြည်သူများအပေါ်အကြမ်းဖက်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်အတွက် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းအနေဖြင့် မြန်မာစစ်တပ်အပေါ် တစ်သံတည်းဖြင့် ညီညွတ်စွာအတူတကွ ပူးပေါင်းဖိအားပေးသင့်ပါသည်။ ယခုကဲ့သို့အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေသည့်ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့်အတူ ရပ်တည်ပေးကြသူများအား အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ ဒီမိုကရေစီပြန်လည်အသက်သွင်းရေးနှင့်ဥပဒေပြန်လည်စိုးမိုးရေးအပြင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်စေမှုအတွက် တာဝန်ရှိသူများကိုလည်း တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရန် မိမိတို့အနေဖြင့် ဒေသတွင်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်လွှားမှ မိတ်ဖက်နိုင်ငံများအတူ လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ချမှတ်ထားခဲ့သောအရေးယူပိတ်ဆို့မှုများကို လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းတိုးတက်မှုများအပေါ်အခြေခံ၍ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးခဲ့ပါသည်။ ယင်းတိုးတက်မှုများကိုနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်စေသည့်အတွက် မိမိတို့၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုဥပဒေများနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို အမြန်ဆုံးချက်ချင်းပြန်လည်သုံးသပ်ရန်လိုအပ်လာမည်ဖြစ်ကာ သင့်တော်သောအရေးယူမှုများကိုလည်း လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဒီမိုကရေစီသည် မည်သည့်နေရာ၌ဖြစ်စေ ထိပါးနှောက်ယှက်ခံနေရပြီးဆိုပါက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့် ယင်းအတွက်ရပ်တည်သွားမည်ဖြစ်သည်” ဟူ၍ ပါရှိပါသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ (၅) ရက်နေ့ မိန့်ခွန်းတွင်
“ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ အင်အားကိုအသုံးပြုပြီး နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဆန္ဒကိုပယ်ဖျက်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် အများယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ပယ်ဖျက်ဖို့ မလုပ်ဆောင်သင့်ဘူးဆိုတာ သံသယရှိဖို့မလိုပါဘူး။ မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ သူတို့သိမ်းယူထားတဲ့အာဏာကိုချက်ချင်းစွန့်လွတ်ရပါမယ်၊ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ဦးဆောင်စည်းရုံးသူတွေ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးရပါမယ်၊ ဆက်သွယ်ရေးကန့်သတ်ချက်အကုန်လုံးကို ပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းပေးရပါမယ်၊ လူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်ခြင်းကနေရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။ ဒီသီတင်းပတ်အစောပိုင်းက ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲ၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဥပဒေစိုးမိုးမှုပြန်လည်အသက်သွင်းရေးကိုအားပေးကူညီဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့ လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ သည့်အတွက်တာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်း နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ အရေးယူပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုတွေလုပ်ဆောင်သွားပါမယ်။” လို့ပြောကြားထားပါတယ်။
သမ္မတကြီး၏မိန့်ခွန်းအပြည့်အစုံ https://bit.ly/3jkn235 တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
တစ်ဆက်တည်း ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၁) ရက်နေ့မှာတော့
“အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်တွေအပေါ် နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မယ့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကို ဒီနေ့ ကျွန်တော်ကြေညာပါမယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရှိနေတဲ့ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ တစ် ဘီလျံကို စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေတရားနည်းလမ်းမကျရယူမှုကနေ တားဆီးဟန့်တားသွားဖို့ အမေရိကန်အစိုးရကဆောင်ရွက်နေပါပြီ။ အာဏာသိမ်းဖို့ညွှန်ကြားတဲ့ စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေ၊ သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင် သူတို့ရဲ့ အနီးကပ်မီသားစုဝင်တွေကို ချက်ချင်းဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့နိုင်မယ့် သမ္မတအမိန့်အသစ်တစ်ရပ်ကို ကျွန်တော်ဒီနေ့ပဲ ခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီ။
ပစ်မှတ်ထားအရေးယူဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မယ့် ပထမအသုတ်စာရင်းကို ဒီသီတင်းပတ်ထဲမှာထုတ်ပြန်သွားပါမယ်။ ဒါ့အပြင် ပို့ကုန်တွေထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာခိုင်မာတဲ့အရေးယူဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုလည်းချမှတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရအကျိုးရှိစေမယ့်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ထိန်းချုပ်ပိတ်ပင်ထားမှာဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက် တိုက်ရိုက်အကျိုးရှိစေမယ့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အခြားသောကဏ္ဍတွေအတွက် ဆက်လက်ပြီးအကူအညီတွေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောချင်တာကတော့ ဆန္ဒပြမှုတွေပိုပြီးများပြားလာနေတာနဲ့အမျှ သူတို့ရဲ့ ဒီမိုကရက်တစ်အခွင့်အရေးကို ပြတ်ပြတ်သားသားတောင်းဆိုနေကြတဲ့ ပြည်သူတွေအပေါ် အကြမ်းဖက်တာ လက်မခံနိုင်သလို အကြမ်းဖက်ခြင်းကနေရှောင်ရှားဖို့အတွက်လည်း ဆက်လက်တောင်းဆိုနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူလူထုဟာ သူတို့ရဲ့ ဆန္ဒသဘောထားတွေကို အများသိအောင်တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာကလည်း စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ နောက်ထပ်လိုအပ်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေ ချမှတ်လုပ်ဆောင်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပြီး ဒီလိုကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမှာတစ်ခြားနိုင်ငံတွေပါဝင်လာဖို့ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်”
ယခုစုစည်းဖော်ပြပေးခဲ့သော အကြောင်းအရာများကတော့ မြန်မာ့အရေးနှင့် စပ်လျဥ်းပြီး အမေရိကန်သမ္မတ ဂျိုးဇက် အာ ဘိုင်ဒင် ဂျုနီယာ နှင့် အိမ်ဖြူတော်မှ ထုတ်ပြန်ချက် ဘာသာပြန် များဖြစ်ပါတယ်။
By : TT
အဆီပြန်ပြီး ဝက်ခြံထွက်လွယ်သူတွေ အသားအရေကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ
မြန်မာ့အရေးတွင် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အန်တိုနီဘလင်ကင်၏ မတ်လအတွင်း ထုတ်ပြန်ချက်များစုစည်းမှု
ဆင်များ အစာရှားပါးလာမှုကြောင့် မန်းရွှေစက်တော်　မန်းချောင်း　ဆင်စခန်းမှာ ကိုဗစ်စည်းကမ်းများနဲ့　အညီ ဆင်စာကျွေးရင်း လာရောက်လည်ပတ်နိုင်
4. သွားနာ၊ သွားကိုက်ခြင်းကို သဘာဝနည်းနဲ့ အမြန်ဆုံးကုသနိုင်ပါပြီ
5. ဟော့ပေါ့နဲ့ အကင်ကို ၇၇ဝဝ ဆိုလို့သွားစားခါမှ မျက်လုံးပြုးပြီးပြန်လာရတဲ့အဖြစ်
Instagram post 17890574839896901
Instagram post 17985002323329529
Instagram post 17895906844791812
Instagram post 17894808223874145